२०२१ मा एक व्हीलचेयर किन्न को लागी अन्तिम गाइड | Karman® व्हीलचेयर
२०२१ मा व्हीलचेयर किन्नको लागि अन्तिम गाइड
जब एक किन्न व्हीलचेयर, wकुर्सीहरु प्रयोगकर्ताहरु सीमित महसुस गर्दैनन्।
के मा महत्वपूर्ण छ जब एक किन्न व्हीलचेयर? पक्षाघात संग एक व्यक्ति को रूप मा चाँडै भित्र सार्न सक्छ एउटा व्हीलचेयर जस्तै अरु कोहि हिड्न सक्छ। व्हीलचेयर मानिसहरुलाई काम वा पसल वा आफ्नो घर बाहिर अन्य कार्यहरु गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ।
केहि तरिका मा, एक व्हीलचेयर साइकल जस्तै छ। यो विभिन्न डिजाइनहरु संगै शैलीहरु बाट चयन गर्न को लागी आउँछ, सहित लाइटवेट्स, शक्ति मोडेलहरु, झुकाउनेहरु, ब्यारियाट्रिक, ergonomic, आदि
बजार मा उपलब्ध धेरै विकल्पहरु संग, सही चयन व्हीलचेयर, विशेष गरी पहिलो पटक को लागी व्हीलचेयर प्रयोगकर्ता, धेरै भ्रामक हुन सक्छ।
यदि फिट सही छैन, प्रयोगकर्ता सहज प्राप्त गर्न सक्दैनन् र यो बाहिर अधिकतम प्रकार्य प्राप्त गर्न सक्षम हुनेछैनन्।
कसरी एक छनौट गर्न को लागी व्हीलचेयर?
तसर्थ, यो सधैं एक राम्रो विचार हो एक पेशागत चिकित्सक (ओटी) लाई सोध्नु जोसँग धेरै प्रकारका साथ पर्याप्त अनुभव छ। व्हीलचेयर.
यो अन्तिम व्हीलचेयर २०२१ को लागी गाइड किन्न मा अन्तर्दृष्टि प्रदान गर्दछ व्हीलचेयर खरीद प्रक्रिया, सबैभन्दा लोकप्रिय हाइलाइटिंग संगै व्हीलचेयर मोडेल र कसरी निर्णय गर्ने व्हीलचेयर तपाइँको लागी सही फिट छ।
सर्वश्रेष्ठ व्हीलचेयर गाइड २०२० किन्ने
जब एक छान्दै व्हीलचेयर, खाता मा लिन को लागी धेरै पक्षहरु छन्, उदाहरण को लागी, प्रणोदन विधि, व्हीलचेयर प्रकार, नियन्त्रण को संयन्त्र, र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, प्रविधिको प्रयोग भयो।
व्हीलचेयर प्रणोदन विधि
मुख्यतः त्यहाँ दुई छन् प्रकार प्रणोदन संयन्त्र को, र ती हुन्:
सेल्फ प्रोपेल व्हीलचेयर:
यी हुन् गरे ठूलो रियर पाels्ग्रा, अगाडि casters साथै हात rims संग। बिरामीहरु उनीहरुलाई बिना कुनै सार्न को लागी प्रयोग गर्छन् सहायताको। ठुलो रियर पाels्ग्राहरु यो सजीलै घाँस वा अन्य कुनै न कुनै भूभाग मा सार्न बनाउन।
यसको अतिरिक्त, स्व-प्रोपेल विपरीत व्हीलचेयर, यी साना पाels्ग्राहरु छन्, र उनीहरु प्रयोगकर्ता भएकोमा भरोसा गर्छन् धकेलियो सहयोगको साथ वरिपरि।
उनीहरु नर्सिंग होम, अस्पताल र एयरलाइन्स मा प्रयोग गरीन्छ।
तिनीहरूको हल्का, 'अटेंडन्ट ब्रेक' को उपस्थिति संगै, हेरचाहकर्ता लाई सार्न को लागी अनुमति दिन्छ सजीलो व्हीलचेयर गति पहाडहरु तल वा सुरक्षा को लागी यसलाई लक जब आवश्यक छ।
व्हीलचेयर प्रकार र तौल
तौल सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारकहरु मध्ये एक हो जब एक खरीद मा खाता मा लिन को लागी व्हीलचेयर.
मा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव छ यातायात सुरक्षित लिफ्ट संग कुर्सी।
यिनीहरु को बारे मा २ to० देखि ४० पाउण्ड तौल र दुबै आत्म-प्रोपेल मा उपलब्ध छन् साथै प्रयोग को लागी पारगमन मोडेलहरु।
यी हुन् मूल्य आर्थिक रूपमा सबै बजेट अनुरूप।
अल्ट्रा-हल्का वजन व्हीलचेयर:
यी तौल मा हल्का छन्, 13 देखि 29lbs को आसपास, र सार्न सजिलो छ।
तिनीहरू दुबै सेल्फ प्रोपेल साथै ट्रान्जिट मोडेल मा उपलब्ध छन्।
यसबाहेक, यी Bariatric प्रयोगकर्ताहरु, यी को लागी डिजाइन गरीएको हो व्हीलचेयर इस्पात जस्तै टिकाऊ धातुहरु बाट बनेको छ, र उनीहरु लगभग ३० देखि l५ एलबीएस को वजन।
भारी शुल्क व्हीलचेयर:
यी मा रोगी को अभिविन्यास परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ व्हीलचेयर र उनीहरुलाई आफ्नो पछाडि झुटो बोल्न अनुमति दिनुहोस्।
तिनीहरू गति को एक विस्तृत श्रृंखला को बनाए राखन को लागी एक तरीका मा डिजाइन गरीएको छ र छाला रोक्नुहोस्, बस्ने सहिष्णुता बढ्दै गर्दा spasticity को व्यवस्थापन मा मद्दत।
कसरी सही आकार छनौट गर्ने व्हीलचेयर?
यसबाहेक, उपयुक्त आकार छनौट व्हीलचेयर खेल्छन् दुबै आराम र साथसाथै प्रणोदन जैव तंत्र मा एक महत्वपूर्ण भूमिका व्हीलचेयर.
यसको अतिरिक्त, त्यहाँ विभिन्न कारकहरु लाई ध्यान मा राख्न को लागी, जस्तै सीट चौडाइ, गहिराई, उचाई, Backrest, र armrest छन्।
को सीट चौडाई को प्रभाव व्हीलचेयर
को सीट चौडाई व्हीलचेयर प्रभावहरु को प्रदर्शन संगै आराम व्हीलचेयर.
सीट चौडाइ पर्याप्त चौडा हुनुपर्छ उपयुक्त प्रदान गर्नुहोस् वजन वितरण।
यो पनी पर्याप्त संकीर्ण हुनु पर्छ तपाइँको सजिलो हेरफेर को लागी अनुमति दिन को लागी व्हीलचेयर.
यसको अतिरिक्त, यदि को सीट व्हीलचेयर छ धेरै फराकिलो, तब यो स्थिति परिवर्तन र गरीब मुद्रा को लागी unasked को लागी नेतृत्व गर्दछ।
यसले यो काफी गाह्रो पा ult्ग्रा जो अन्ततः एक प्राप्त गर्ने जोखिम बढाउँछ पहुँच गर्न बनाउँछ चोट.
यसबाहेक, यदि को सीट व्हीलचेयर धेरै संकीर्ण छ, यो कम स्थिर र साथमा कम पैतृक गर्न को लागी आरामदायक हुन गइरहेको छ।
सीट गहिराई को महत्व व्हीलचेयर
को सीट गहिराई व्हीलचेयर जस्तो छ महत्त्वपूर्ण आराम को लागी चौडाई को रूप मा साथै को biomechanics को रूप मा व्हीलचेयर। यो एक जब किन्न नबिर्सनुहोस् व्हीलचेयर.
यदि सीट धेरै छोटो छ, यो नितम्बहरु लाई ओभरलोड गर्न को लागी समाप्त हुनेछ र यस प्रकार दबाव हेरचाह को जोखिम मा वृद्धि हुनेछ, जो प्रभावित हुनेछ गतिशीलता कैस्टर मा धेरै धेरै वजन राखेर।
यसको विपरीत, यदि सीट धेरै गहिरो छ, यो घुँडा को पछाडि दबाव राख्छ, जो एक ढिलो मुद्रा को लागी नेतृत्व गर्दछ, र यसले दबाव को हेरचाह को साथसाथै को प्रणोदन लाई असर गर्न सक्छ। व्हीलचेयर.
को खुट्टा लम्बाइ को प्रभाव व्हीलचेयर
यो व्हीलचेयरको खुट्टा को लम्बाई व्हीलचेयर footplates को पर्याप्त उचाई स्थापित गर्दछ, जो शरीर को वजन को भाग खुट्टा द्वारा लिईन्छ।
सीट उचाई को महत्व व्हीलचेयर
सीट पर्याप्त उच्च प्रयोगकर्ता को खुट्टा बाट तौल लिन को लागी हुनु पर्छ, तर एकै समयमा पनी आराम संग टेबल को तहत फिट गर्न को लागी पर्याप्त कम।
जब सीट उचाई मा विचार तपाइँ पनी कुशन को उचाई मा विचार गर्नु पर्छ कि तपाइँ हुनुहुनेछ प्रयोग.
को उचाइ को महत्व व्हीलचेयर ब्याकरेस्ट
Backrest को उचाई को डिग्री मा निर्भर गर्दछ असक्षम.
आदर्श रूप मा, एक backrest कि उपयुक्त प्रदान गर्दछ राम्रो संग बसेको स्थिति को लागी तनाव र स्वतन्त्रता प्रदान गर्दछ आन्दोलन को एक राम्रो छनौट हो।
Postural चिन्ता संग मानिसहरु को लागी, संग एक उच्च backrest स्थिर स्थिरता राम्रो फिट हुन सक्छ।
जबकि, अतिरिक्त हात स्वतन्त्रता को लागी प्रयोगकर्ताहरु को लागी देखी, एक कम backrest एक महान विकल्प हो।
Armrest उचाई: तपाइँ आराम संग आफ्नो forearms आराम गर्न सक्षम हुनु पर्छ।
Footrest लम्बाई: यो एक बाधा बन्न धेरै टाढा विस्तार गर्नु हुँदैन।
हाम्रो लोकप्रिय मोडेलहरु एक किन्नको लागी व्हीलचेयर
यहाँ हाम्रा केहि उत्कृष्ट बिक्रि छन् व्हीलचेयर:
ट्रान्जिट गो पावर व्हीलचेयर
यो ट्रान्जिट गो अन्य हल्का द्वारा प्रेरित गरिएको छ व्हीलचेयर बजारमा। वास्तव मा, यो सजिलै संग foldable साथै transportable छ।
यो डिजाइन गरिएको छ सुधार को जीवन व्हीलचेयर प्रयोगकर्ताहरु विश्वव्यापी रूपमा। यो हल्का वजन तह शक्ति मध्ये एक हो व्हीलचेयर, मात्र 56 पाउण्ड तौल।
यो व्हीलचेयर संगै स्वतन्त्रता लाई बढावा दिन्छ गतिशीलता साथै आराम। यो दुबै बाहिरी साथै भित्री नेविगेशन को लागी एकदम सही छ।
पेशेवरहरु: Joy जोयस्टिक प्रयोग गर्न सजिलो ● तह र हल्का फ्रेम
विपक्ष: every प्रत्येक भूभाग को लागी उपयुक्त छैन
T-2017 र T-2019-26 पाउण्ड
द्वारा T-2000 श्रृंखला कर्मान हेल्थकेयर एक वेल्क्रो माउन्ट खुट्टा पट्टा निश्चित पूर्ण लम्बाई armrests संगै संग सुसज्जित छ। यसबाहेक, यो एक हो हल्का, संकुचित यातायात व्हीलचेयर को लागी सजिलै संग foldable फ्रेम संग सजिलो यात्रा साथै भण्डारण। यो footrest संग मात्र २३ एलबीएस तौल।
यसबाहेक, सास फेर्ने नायलॉन असबाब उच्च ग्रेड, ज्वाला retardant, र यो पनि सफा गर्न को लागी सजिलो छ। यो यातायात कुर्सी सीट चौडाइ विकल्प प्रदान गर्दछ, र यो 250 पाउण्ड को एक वजन क्षमता छ।
S-305 Ergonomic व्हीलचेयर
द कर्मन एस Ergo 305 व्हीलचेयर प्रदान गर्दछ प्रशंसनीय गुणस्तर बजार मा अरु को तुलना मा एक धेरै अधिक प्रतिस्पर्धी दर मा।
को वजन व्हीलचेयर मात्र २ l पाउण्ड छ, र यो एक 29 पाउण्ड वजन क्षमता छ। यो व्हीलचेयर १″ ″ साथै १ 16 ″ सीट चौडाई मा आउँछ।
यो सुसज्जित छ विशेषताहरु जस्तै तत्काल पाels्ग्रा रिलीज साथै एक समायोज्य armrest रूपमा।
संग एस-305 तपाइँ साधारण र कुञ्जी समायोज्य विकल्पहरु को लागी पहुँच प्राप्त गर्नुहोस्।
At कर्मान स्वास्थ्य सेवा हामी विश्वास गर्छौं कि त्यहाँ कुनै एक आकार सबै फिट हुन्छ व्हीलचेयर, र यो व्यक्तिगत परिस्थिति साथै प्रयोगकर्ताहरु को आवश्यकताहरु मा निर्भर गर्दछ।
जे होस्, यदि तपाइँ हामीलाई सम्पर्क गर्न को लागी स्वतन्त्र महसुस गर्न को लागी आवश्यक छ एक छनौट संग कुनै पनि सहयोग व्हीलचेयर, र हाम्रा सहयोगी स्टाफ उपयुक्त सिफारिशहरु संग फिर्ता पाउनुहुनेछ।
हाम्रो सबैभन्दा राम्रो भिडियो को लागी वर्षको २०२१ को पुरस्कार व्हीलचेयर खण्ड गाइड केन @ बायाँ खुट्टा योद्धा जान्छ
यो प्रविष्टि मा पोस्ट हल्का व्हीलचेयर, रिटेल, व्हीलचेयर, व्हीलचेयर समाचार र ट्याग असक्षम, हल्का व्हीलचेयर, हल्का व्हीलचेयर, गतिशीलता, यात्रा, व्हीलचेयर, व्हीलचेयर समाचार, व्हीलचेयर यात्रा, व्हीलचेयर प्रयोगकर्ता, व्हीलचेयर.
अपाic्गता भएका व्यक्तिहरुले आफ्नो ह्वीलचेयरमा चमत्कारहरु हासिल गरेका छन्
व्हीलचेयर खेल र यो शक्तिशाली क्रान्ति हो